प्रथम शहीद घोषणा गर्नुपर्छ « Anumodan National Daily
प्रथम शहीद घोषणा गर्नुपर्छ
प्रकाशित मिति : ९ कार्तिक २०७४, बिहीबार ०७:४५
साहसी, बलवान, हतियारको ज्ञान भएको, शासकका विरुद्ध बोल्न सक्ने, अन्याय नसहने, ठूलो भारी उचाल्न सक्ने, उफ्रिएर ठूला पर्खाल र बारी नाघ्न सक्नेलाई पश्चिम नेपालमा अहिले पनि बाँकावीर भन्ने गरिन्छ । बाँकावीर शब्द निकै लोकप्रिय छ ।
बुढापाकाले बलवान जस्तो देखिने व्यक्तिलाई संकेत गर्दै अरुलाई ‘यो बाँकावीर हो, योसँग नलाग्’ भन्ने गर्दछन् । त्यसैगरी आफूलाई बलियो र साहसी ठान्नेहरुले ‘म बाँकावीर हुँ’ भनेर अरुलाई हाँक दिने गर्दछन् । आजको पुस्तासम्म आउँदा ‘बाँकावीर’ शब्द कहाँबाट कसरी प्रयोग भएको हो भन्ने जानकारी सबैलाई छैन ।
बाँकावीर कुनै नाम नभएर जनताले आफ्ना नेतालाई दिएको उपमा हो । यो उपमा पाएका थिए अछामका बलदेव शाहीले । राणा शासकहरुले शासनको सुरुवातमै अछाममा गरेको दमनविरुद्ध उभिएकाले उनले पाएका हुन् । तत्कालिन अछामी राजा रणभीम शाहीका भाई हुन् बलदेव । राणाहरुले अछामी जनतामाथि गरेको अन्याय, अत्याचारविरुद्ध राजपरिवारबाटै उनले विद्रोह गरेका थिए ।
राणाविरुद्ध बलदेव किन लागे ?
वि.सं. १९०३ मा कोतपर्वमा सयौं लासमाथि खडा गरेको आफ्नो शासन सत्ता टिकाउन जंगबहादुर कुँवर राणाले सबैतिर आतंक सिर्जना गरे । आफूविरुद्ध हुन सक्ने सम्भावित विरोधलाई ध्यानमा राखेर उनले दमनको नीति अख्तियार गरेका थिए । त्यस्ता जिल्ला वा राज्यमा विशेष सैन्य व्यवस्था समेत गरेका थिए । तत्कालिन अछाम राज्यबाट विरोध हुन सक्ने भन्दै जंगबहादुरले विशेष सैन्य योजना बनाए ।
जंगबहादुरका बुबा बालनरसिंहले अछामीहरुले पृथ्वीनारायण शाहका फौजसँग गरेको प्रतिरोध, गोर्खाली राज्यविरुद्ध गरेको विद्रोहको प्रयासबारे राम्रो जानकारी राख्दथे । बालनरसिंह त्यतिबेला डडेल्धुराका हाकिम रहेकैले त्यस क्षेत्रमा अछामीहरुले गोरखाली फौजसँगको प्रतिरोध संघर्षलाई राम्ररी नियालेका थिए । भरखर सुरु भएको आफ्नो शासनविरुद्ध अछामीहरुले विद्रोह गर्नसक्ने भन्ने बुबाको सुझावपछि जंगबहादुरले अछामलाई विशेष निगरानीमा राख्ने केन्द्रीय नीति नै बनाए । धेरै ठाउँमा सैनिक पोष्टहरु विस्तार गरियो । अछामी जनतालाई पूर्व–पश्चिम गर्ने प्रशासक र सैनिक पल्टनका सरसमान र हतियार ओसारपसारमा काममा सीमित गर्ने, नयाँ सैनिक पोष्टका जवानलाई आवश्यक अन्नपानी उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता ज्यादातिमा सीमित गराइन्थ्यो ।
त्यस्तै सेनाका जवानहरुले गाउँगाउँ पसेर बिना मूल्य घरेलु उद्योगबाट बनेको ठिटुवा (कपडा) लिने, घरघर पसेर महिलाहरुलाई बलात्कार गर्नुका साथै युवाहरुलाई घोडा बनाइन्थ्यो । प्रशासक र पल्टनका जवानहरुलाई अछामीहरुले पिठ्यूँमा बोकेर सवार गर्नुपथ्र्यो । राणाहरु को अत्याचारविरुद्ध बोल्ने कसैको हिम्मत नै थिएन । स्वाभिमानी बलदेव शाहीले राणा पल्टन मुख्यालय रहेको बान्नीगढी पुगेर हाकिमसँग अछामी जनतालाई अरुसरह व्यवहार गर्न आग्रह गरे । हाकिमले कुरा नसुनेपछि बदलेवले जंगबहादुरलाई अछामी जनतालई दुःख नदिन पत्र लेखेर आग्रह समेत गरे । तर, उनको आग्रह स्थानीय प्रशासक, सैनिक अफिसर र केन्द्रमा रहेका जंगबहादुरले कसैले सुनेनन् ।
राणाहरुले अछामी जनतालाई दिएको दुःख र अत्याचार बलदेवले सहन सकेन । उनी गाउँघर पुगेर जनताका दुःखबारे जानकारी लिन थाले । राणाहरुको चर्तिकला, ज्यादातिबारे सूचना लिन थाले । यही विषयलाई लिएर बान्नीगढीमा रहेको राणा पल्टनले बलदेवमाथि आफ्नो सरकारविरुद्ध अछामीहरुलाई भड्काउने र उक्साउने काम गर्दै हिड्ने गरेको आरोप लगाए । क्रमशः अछामीहरुमाथि दमन गर्न थालियो ।
साहसी बलदेवले पल्टनको आरोपको बेवास्ता गर्दै राणा सरकारको अत्याचारविरुद्ध जनतालाई भूमिगत रुपम संगठित गर्दै हिडे । राणा पल्टनका अफिसर तथा जवानहरुलाई असहयोगको नीति लिए । उनीहरु एक्लै भेटिए भौतिक कार्वाहीदेखि विभिन्न समूहमा रहेका राणा पल्टनमाथि छापामार ढंगबाट आक्रमण गरी कब्जा गर्ने, राणा पल्टनका सुराकीलाई गाउँबाट लखेट्ने र भौतिक कार्वाही समेत गरेको बलदेव शाही सम्बन्धि इतिहासमा पढ्न पाइन्छ ।
राणा सरकारविरुद्धको यो विद्रोहको प्रभाव डोटी, डडेल्धुरा, बझाङ, दैलेख हुँदै जुम्लासम्म फैलियो । बलदेवलाई जनताको समर्थन बढ्दै गयो । जनता पनि आफूमाथिको अन्याय र अत्यचारविरुद्ध एकजुट हुँदै गए । यहीबेलाबाट बलदेवको शाहसिक कार्यबाट प्रभावित भएर जनताले बलदेवलाई ‘बाँकावीर’ को उपाधि दिए । यसपछि उनलाई बाँकावीर भनिन थालियो । राणा शासनको सुरुवातमै अछामलाई केन्द्र बनाएर बाँकावीरको नेतृत्वमा विद्रोहको बिजारोपण भयो । यो विद्रोहले राणा सरकारको केन्द्र नै थर्कमान हुन पुग्यो । केन्द्रबाटै यो विद्रोहलाई तुहाउने योजना बनाइयो । त्यसको लागि बाँकावीरलाई हत्या गर्ने योजना बनेको भेटिन्छ ।
वि.सं. १९०५ बैशाखमा प्राइमिनिस्टर एण्ड कमाण्डर इन्चीफका हैसियतले श्री ३ जंगबहादुर कुँवर राणाले बाँकावीरलाई काट्न आदेश दिएका थिए । उनीसँगै बझाङका अम्बर सिंह भण्डारी र इश्वर सिंहलाई पनि काट्न आदेश भएको थियो ।
अङ्गरक्षकले गरे बाँकावीरको हत्या
बाँकावीरको विद्रोहको निशाना राणा पल्टनको मुख्यालय बान्नीगढी बन्दै थियो । त्योबेलासम्म राणा सरकारले केन्द्रबाट बलदेवको हत्या गर्न खटाइएका भवानी सिंह र कालु सिहं स्वाँर बेलदेवकै अंगरक्षक बनिसकेका थिए । जुनकुराबाट बलदेव अनविज्ञ भएको देखिन्छ । बान्नीगढीमाथि हमलाको योजना कार्यान्वयनको क्रममा अङ्गरक्षकको रुपमा रहेका भवानीसिंह र कालुसिंह स्वाँरले बाँकावीरको हत्या गरेका थिए ।
वि.सं. १९०६ भाद्र महिना बन्नीगढीको राणा पल्टनमाथि आक्रमणको तयारीको क्रममा बान्नगढी र नौलागढीको वरीपरीको भूगोलको अध्यायन गरी बाँकावीर साँझतिर काफलखेत फर्के । नुहाइरहेको मौका छोपी स्वाँर बन्दुले आफूसँग भएको तरवारले हानेर बाँकावीरको निमर्म तरिकाले हत्या गरे । राणा सरकारलाई बुझाउन बाँकावीरको टाउका झोलामा बोकेर उनीहरु राताराता अछामबाट काठमाडौँतिर लागे ।
बाँकावीरको हत्याको खबरले अछामी मात्र नभएर यो क्षेत्रमा राणा सरकारविरुद्ध जुर्मुराइरहेका जनता भावविह्ल भए । बाँकावीरको हत्या गरेर राणाहरुविरुद्ध उठेको आन्दोलन तुहाउने योजनामा राणा सरकार सफल भयो । तत्कालिन सोमवंशी अछामी राजा रणभीम शाहका सन्तानहरुले अहिले पनि हाड परेको भन्दै काफल खेतमा रहेको धाराको पानी खाँदैनन् । उनीहरु उक्त धारालाई ‘हाड परेको’ भन्दै प्रयोग समेत गर्दैनन् ।
भवानीसिंह र कालुसिंह स्वाँरलाई केन्द्र सरकारले नै बाँकावीरको हत्या गर्न पठाएको कुरा इतिहासकारहरुले उल्लेख गरेका छन् । दाजु सरुपसिंह लगायतलाई राणाहरुले लखेटेकाले आफूहरु राणा सरकारविरुद्ध लड्न तयार भएको बताएर भवानीसिंह र कालुसिंहले बाँकावीरको विश्वास जितेका थिए । चतुर अछामी स्वाँरको भित्री खेल इमान्दार बाँकावीरले बुझ्न नसक्दा राणाविरुद्धको मुस्लो निभ्यो । अछामी स्वाँरहरुको कोतपर्व पहिलेदेखि नै जंगबहादुरसँग राम्रो सम्बन्ध भएको बताइन्छ । तर, अपेक्षाअनुसार सहयोग नगरेपछि जंगबहादुरले स्वाँर परिवारलाई भगुवा भन्दै लखेटेको देखिन्छ ।
इतिहासकार बाबुराम आचार्यले पनि कोत पर्वबाट डराएर काठमाडौँमा जागिरे रहेका रुद्रसिंह स्वाँर मधेसतिर लागेको उल्लेख गरेका छन् । कोत पर्वमा सहयोग नगरेको भन्दै स्वाँरप्रति श्री जंगबहादुर रिसाएका थिए । वि.सं. १९०६ पौष सुदि १७ रोज ७ मा कर्णेल खड्गबहादुर कुँवर राणाले लेखेको पत्रले कोत पर्वपछि मधेस छिरेका स्वाँरलाई काठमाडौँमा फिर्ता गर्ने सर्तमा स्वाँरहरु बाँकावीरको टाउका काटेर जंगबहादुर राणालाई बुझाउन तयार भएको देखिन्छ । उक्त पत्रको ‘अरायाबमोजिम बलदेव शाहीलाई काटी आउँदा हाम्रो दाजु मधेस रह्याका छन् झिकाइबक्सनु हवस्’ वाक्यले यही कुरा पुष्टि गर्छ ।
गोर्खाली फौजले अछाममाथि आक्रमण गर्दा स्वाँरहरुले प्रतिकार नगर्न सल्लाह दिएको तर शाहहरुले नमानेबाटै शाह र स्वाँरबीच इगोको रुपमा विकास भइसकेको थियो भनिन्छ । त्यही इगोका कारण स्वाँरहरु बाँकावीरको टाउको काट्न तयार भएर काठमाडौँबाट अछाम हिडेको बताइन्छ ।
बाँकावीर नेपालको प्रथम शहीद
नेपालका प्रथम शहीद मानिदै आएका लखन थापा वि.सं. १९३३ सालमा मारिएका थिए । तर त्यसको ठीक २७ वर्ष (वि.सं.१९०६ भाद्र) पहिले राणा शासनको अन्याय र अत्यचारको विरोध गरेको आरोपमा राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको लिखित आदेशबाट बलदेव शाही ‘बाँकावीर’को निर्मम ढंगबाट हत्या गरिएको इतिहास जिउँदो छ ।
यहाँ लखन थापाले पाएको सम्मानको विरोध होइन कि त्योभन्दा पहिले हत्या गरिएका बलदेव शाहको बलिदानी र वीरताको अपमान हुनुहुँदैन भन्ने कुरा हो । लखन थापाको वीरता र बलिदानलाई कसैले कम आकलन गर्नु हुँदैन । त्यसैगरी बाँकावीरको वीरता र बलिदानको सम्मान गरिनुपर्छ । इतिहासलाई साँचि राख्दै बाँकावीरलाई नेपालको प्रथम शहीद घोषणा गरिनुपर्छ ।
सेती अञ्चल दिग्दर्शन–पूर्णप्रकाश ‘यात्री’, झारखण्ड वैद्यनाथ अछाम एक चिनारी–सुरतबहादुर शाह, नेपालका प्रथम शहीद बाँकावीर–सुरत बहादुर शाह, नेपालका प्रथम अमर शहीद ‘बाँकावीर’ बलदेव (सुदूरपश्चिम)–मोतिलाल बोहरा ।
(साभार : अनलाइन डबली)